| Yool News
July 21, 2020 - Written by Yool News
London(Xogreebnews)-Gudoomiyihii hore ee degmada Wajaale Mujaahid Aadan Shiine, ayaa beeniyey Daymaha Xad-dhaafk ah, ee u sheegay Maamulkii Shalay Xilka wareejinayey inuu ku wareejiyey. Gudoomiye Aadan Shiine, waxa ku eedeyey Gudoomiye Xaashi inuu been abuurad ku samaynaayo nidaamka dawladnimo, waxanu sheegay in Daymaha uu maanta ku wareejiyey Maamulka cusub ee degmada in baadhis lagu sameeyo.
Sidoo kale, Gudoomiye Aadan Shiine waxa uu u mahadceliyey Madaxweynaha JSL iyo Xukumada iyo weliba Wasiirka arimaha gudaha oo ku boggaadiyey horumarka balaadhan ee ay dalka gaadhsiiyeen mudadii ay talada hayeen. Gudoomiyihii hore ee Wajaale, waxa uu soo Bandhigay waxqabadkiisi isagoo qodob-qodob u dul istaagtay. Gudoomiye hore Aadan Shiine oo ku sugan UK, ayaa khadka Telefoonka ugu waramay Warbaahinta Xogreebnews, waxananu ugu horeyn waydiinay waxa ka jira Daymaha uu maamulkii xilka wareejiyey sheegeen inuu isagu ku wareejiyey, waxanu yidhi:
“Marka hore waxaan Halkan salaan uga dirayaa Madaxweynaha JSL Md. Muuse Biixi Cabdi, Madaxweyne ku xigeenka Cabdiraxmaan Saylici iyo golaha Xukuumadiisa iyo weliba Wasiirka arimaha gudaha Md. Maxamed Kaahin Axmed. Waxaan Halkan ka cadaynayaa Maayirkii laga Bedelay degmada Wajaale Xaashi, inuu sheegay Daymo faro-badan, kuwasoo uu yidhi waxaan kala wareegay, maamulkii hore oo ah Aniga. Waxaan Umadda reer Somaliland u cadaynayaa in aanan Dayta intaa le’eg aanan ku wareejin. Xil-wareejintuna waxay leedahay nidaam dawladnimo, waraaqihii aan xilka ku wareejiyey waxay yaalan Xafiiska Badhasaabka Gobolka Gabiley, Alla ha u naxariistee waxa Saxeexay Badhasaab Xamse, waxa joogtay Wasaarada arimaha gudaha. Waxanaan xilka u wareejiyey si maamus iyo sharaf leh…
Umada Somaliland iyo reer Wajaaleba way na kala taqaana aniga iyo Xaashi, waxaan Halkan ka cadaynayaa inaan Dhulna qaadan Bakhaarona ka dhisan, anigu sharaf iyo maamus ayaa dalkayga ugu Shaqeeyey sharaftiibaanan kaga tagay, Daymaha Aan wareejiyey, waxay ahayd intii ka hadhay Wadaada, cadaymihina waxay yaalan Xafiiska Badhasaabka”.
Sidoo kale waxa uu Gudooomiye Aadan Shiine ugu baaqay Saxaafada iyo Bulshada reer Wajaale in aanu Laalush qofna ka qaadan, dhulna qaadan, dhulna bixin. Marka laga reebo Guriga Martida, “Ma jirto Qof aan Laalush ka qaatay ama dhul noocu doonoba ha ahaadee, sidoo kalena ma jiro dhul aan bixiyey oo aan siiyey shaqsi. Waxa keliya ee aan gacantayda ku Saxeexay oo aan bixiyey waxa weeye dhulka aan ka dhisay Guriga Martida iyo Dhulka Dab-demis Wajaale, hadaba waxaan Saxaafada iyo reer Wajaale ba ka codsanayaa inay xaqiiqda ka hadlaan”.
Gudoomiye Maxaa kuu qabsoomay Mudadii aad xilka Magaalada Wajaale haysay?.
“Toga la Iibiyey ee ahaa Danta guud, isagoo xashiish ka buuxo, waxaan ahaa Gudoomiyihii ugu horeeyey ee Nidiifiya. Biyihii Wajaale oo aan kasoo qaaday Kalabaydh, Taasoo uu iga caawiyey Maayirka Gabiley iyo Wasiirkii Wasaarada Maaliyada Marwo Samsam alla ha barakeeye. Sidoo kale waxaan dhisay Gurigii Martida oo ay iga caawisay Wasaarada Maaliyada. Iyo Dhulkii iyo asaas-kii Dab-demis Wajaale oo aan Dhagax-dhigay. Waxa kaloo aan dhisay Waddo 2Km ahayd.
Sidoo kale, waxaan Qalabayn iyo daryeel joogta ah ku samayn jiray Dhakhtar guud ee Wajaale, selina Waxa iga caawisay Wasaarada Maaliyada iyo Wasiir Samsam. Waxa kaloo kamid ahaa waxqabadkaygii Sariibada Wajaale oo aan dib u dhis iyo casriyey ku sameeyey, iyo weliba nadaafada guud ee Magaalada oo aan waqti badan geliyey. Waxa kaloo aan u dhisay Ciidamada Booliska Kaantaroolka Wajaale Sandaqad laba makhsin ah oo aan ugu sameeyey solartiina”. Ayuu yidhi Gudoomiye Aadan Shiine